ရခိုင်လူမျိုး သမိုင်း အကျဉ်းချုပ် | Danya Wadi
»မှတ်စု»ရခိုင်လူမျိုး သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်
Posted by danyawadi on August 30, 2013 in မှတ်စု, သမိုင်း, အထူးကဏ္ဍ
ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် ၄င်းတို့၏ ဇာတိနေရပ်ဖြစ်သော နတ်မြစ်ဝမှ မော်တင်စွန်း (ယခု ဧရာဝတီတိုင်း) အထိ ရှည်လျားသည့် ရခိုင်ကမ်းမြောင် ဒေသ တစ်လျှောက် တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသ သို့မဟုတ် ရခိုင်ပြည် သည် ခေတ်အဆက်ဆက် ရခိုင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးရာ သီးခြား လွတ်လပ်သည့် တိုင်းပြည် ဖြစ်ခဲ့၏။ ရခိုင်ဘုရင်များ လက်ထက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းဒေသ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တြိပူရ ဒေသတို့သည် ရခိုင်ပြည်၏ လက်အောက် ခံ ဖြစ် ခဲ့သဖြင့် ထိုစဉ်ကလ ကပင် ရခိုင်လူမျိုးအချို့သည် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားအဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေသနှင့် တြိပူရဒေသတို့ တွင်လည်း အစဉ်အဆက် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ယနေ့ ထက်တိုင် နေ ထိုင်ကြ ဆဲလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့လူဦးရေ၏ လေးရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်သည် ရခိုင်လူမျိုးတို့ဖြစ်သည်။
နှစ်ဌါနကို၊ပြည့်ဝမဏ္ဏိုင်၊စောင့်စွမ်းနိုင်သည် ရခိုင်နာမ ဘွဲ.့မည်လှဖြင့် အနန္တာသညှာခေါ်အပ်ရာတည်း”လို့လည်း သျှင်ရာဂိန္ဒမော်ကွန်းတွင် ဖွင့်ဆိုထား ရှိကြောင်း ကို တွေ.ရှိနိုင်သည်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်း ဒေသများ သို့ဝင်ရောက် ခြေချသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပျူနှင့် အနွယ်တူကမ်းယံ လူမျိုးများ သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း အရပ်ဒေသ များမှ တဆင့် ၀င်ရောက် လာဖွယ်ရာရှိသည်။ ရခိုင်ရာဇ၀င်ဟောင်းများ၌ ရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဗုဒ္ဓပွင့်တော် မမူမှီ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်လောက်မှ စ၍ ဓည၀တီ ကို တည်ထောင်သည့် မာရယု မင်းဆက် ၅၄ ဆက်မျှ စိုးစံခဲ့ကြောင်း ဒုတိယအကြိမ် ဓည၀တီကိုတည်ထောင်သည့်ကံရာဇာကြီး မင်းဆက် ၂၉ ဆက်မြောက် စန္ဒသူရိယမင်း သည် ဗုဒ္ဓနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပြီး မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသား ဖေါ်ပြကြသည်။
ရခိုင်ကမ်း ရိုးတန်းဒေသတ၀ိုက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် သမိုင်းဝင်ထောက်အထားများအရ ပုဂံပြည် မတိုင်မှီ ရာစု နှစ်များစွာကပင် တိုင်းပြည် မင်းဆက်များ ထူထောင်ပြီး စီးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ဓည၀တီ၊ ဝေသာလီနှင့် လောင်းကြက် ပြည်များသည် သူ့ခေတ်နှင့် သူ့အခါ ထင်ရှားကြီးကျယ် သည့် တိုင်းပြည် များဖြစ်ခဲ့ကြ သည်။ မြောက်ဦးခေတ် ရောက်သောအခါ ရခိုင်ဘုရင်များသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတ ခုလုံးကိုစည်းလုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ရုံမျှမက၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ် တကောင်းဒေနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တြိပူရ ဒေသများကိုပါ နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ကို စတင်စည်းရုံးခဲ့သည့် ပုဂံမင်းဆက် ဘုရင်များ သည်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံကို ထူထောင်သည့် ဘုရင့်နောင်သည်လည်းကောင်း၊ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို စည်းလုံးတည်ထောင်သည့် အလောင်း ဘုရား သည် လည်းကောင်း ရခိုင်ပြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ပယ် တစ်ခု အဖြစ်သို့ မသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကြချေ။ရခိုင်သည် ၁၈၇၄ ရောက်မှသာ ဘိုးတော် ဗဒုံမင်း လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ဘာသာရေးကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်း ကြသည်။ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးမြို့ ဝေသာလီ ရွှေတောင်ကြီးတွင် စတုတ္တသင်္ဂါယနာကို ဝေသာလီဘုရင်သိရိစန္ဒြား(သိရိစမ္မ၀ိဇယမင်း)လက်ထက် သီဟိုနိုင်ငံမှ သံဃာတော်တစ်ထောင်ကို ပင့်ဆောင်ပြီး ရခိုင်ပြည်မှ သံဃာတော် တစ်ထောင်ပေါင်းနှစ်ထောင်ဖြင့် စတုတ္တသင်္ဂါယနာကို တင်ခဲ့ပါသည်။၄င်းသင်္ဂါယနာ တင်ခဲ့ပုံကို
ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် ရခိုင်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားကို အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ ရခိုင်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာ ဘာသာစကားသည် အတော်များများ တူပြီး ရ-သံ /r/ နှင့် ယ-သံ /j/ ထွက်ကွာသည်။ ရခိုင်စာပေ အရေးအသားနှင့် မြန်မာစာပေး အရေး အသားသည် ဆင်တူသည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် များသော အားဖြင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ သူတို့သည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ပထမဦးဆုံးသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ရခိုင် ယဉ်ကျေး မှုသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံထား၍ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ စာပေ၊ ဂီတ နှင့် အနုသုခုမပညာရပ်တို့သည် ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ကျင် အားကစားနှင့် ရခိုင်ဆီမီးခွက်အကတို့သည်ထင်ရှားသည်။
အမျိုးသမီးများသည်ဇာပုဝါကိုရင်စလွယ်သိုင်းပြီးကော် လာမဲ့ ရင်စေ့လက်ရှည်အင်္ကျီကို ရိုးရာလုံချည်နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်သည်။ ၁၅ မှ ၁၈ ရာစု ရခိုင်မင်းဆက်များ၏ ဗိသုကာ လက်ရာများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများကို မြောက်ဦးမြ်ို့တွင်လေ့လာ နိုင်သည်။
ရခိုင် စာပေသည် ဓည၀တီခေတ် (ဘီစီ ၃၀၀) စုခန့်ကပင် စတင် ထွန်းကားခဲ့ကြောင်း၊ အထောက်အထားတွေ့ရသည်။ ဝေသာလီခေတ် နှောင်းပိုင်းမှ စလို့ ရက္ခ၀ဏ္ဏ အက္ခရာဖြင့်ရေး သားပြီး ကြိုးတန်းပိဋကတ်ကိုစံထားလို့ လေ့လာခဲ့ကြပုံများကိုလည်း ရခိုင်သမိုင်းတွေမှာ တွေ.ရှိရသည်။ထိုခေတ် ကဓည၀တီ မြို့ဟောင်းအနီး မှ တောင်ပေါက်ကြီးကျောက်စာတွင် အသောကခေတ်က အသုံးပြုခဲ့သော ဗြဟ္မီအရေးအသားဖြင့် ရေးထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ဗြဟ္မီအက္ခရာ အရေးသား စာတန်းပါ ဗိုက်ပူဘုရား ကျောက်စာသည်လည်း ဓည၀တီခေတ် ရခိုင်စာပေ ထွန်းကားမှု၏ သက်သေ ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဝေသာလီခေတ် (အေဒီ လေးရာစုမှ ဆယ်ရာစု) တွင် ရခိုင်စာပေ ထွန်းကားမှုသည် ကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါသည်။ အေဒီ ခြောက်ရာစု ဂုပ္ပတ အက္ခရာ ဖြင့် ရေးထိုးထားသော ယေဓမ္မာ ရခိုင်ကျောက်စာများစွာကို ဤခေတ်တွင် တွေ့ရသည်။ ဝေသာလီခေတ်၏ အထင်ရှားဆုံး ကျောက်စာမှာ အေဒီ ၇၂၉ တွင် ရေးထိုးသော အာနန္ဒစန္ဒြမင်း ကျောက်စာဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်စာတွင် ရခိုင် မင်းဆက်များကို ဂါထာ ၆၅ ဂါထာဖြင့် ရေးထိုးထားသည်။ ထိုသို့ မင်းစဉ်မင်းဆက်များကို အစအဆုံးမှတ်တမ်း တင်ထားသည့် ကျောက်စာ မျိုးမှာ မြန် မာပြည်တွင်သာမက အိန္ဒိယပြည်တွင်ပါ အစောဆုံးဟု သိရသည်။ ဝေသာလီခေတ်တွင် ကျောက်စာများသာမက မော်ကွန်းလင်္ကာ၊ သျွှန်းလိုက်ရတု၊ စသည့် ရတုကဗျာများ ထွန်းကားခဲ့သည်။ အမတ်ကြီး မေဓပညာရေးသားသည့် မေဓပညာ မော်ကွန်းလင်္ကာမှာ ဝေသာလီခေတ် လက်ရာဟု ထင်ရှားသည်။ လေးမြို့ခေတ် (အေဒီ ၁၁ ရာစု ၁၅ ရာစု) တွင် ကျောက်စာအရေးအသားများများနှင့် အတူ ကဗျာစာပေများလည်း ထွန်းကားသည်။ ဗျည်း ၃၃ လုံးလင်္ကာမှာ လေးမြို့ခေတ် တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာစာပေတွင် ထင်ရှားသည့် လောကသာရပျို့ကို ရခိုင်သူမြတ်က လေးမြို့ခေတ်တွင် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လေးမြို့ခေတ် ရခိုင် ကျောက်စာများအနက် ထင်ရှားသော ကျောက်စာများမှာ လောင်းကြက်တောင်မော် ကျောက်စာနှင့် မဟာထီး မီးကျောင်းရုပ် ကျောက်စာ တို့ ဖြစ် သည်။ လောင်းကြက်တောင်မော် ကျောက်စာသည် အလျား ပေ ၃၀ ရှိပြီး မြန်မာပြည်တွင် အကြီးဆုံး ကျောက်စာ ဖြစ် သည်။ မြောက်ဦးခေတ် တွင် ရေးစပ်သီကုံးခဲ့သော ဘဒူမင်းညို၏ ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း၊ နန်းတွင်းမိညို၏ ကိုယ်ရည်သွေးရတုနှင့် စာဆို ဥက္ကာပျံ၏ ၁၂ လ ရာသီ ရတုတို့မှာ ကျော်ကြားသည်။
* ၀ါသုဒေ၀ညီနောင်တကျိပ်တို့တည်ထောင်သော ဒွါရာဝတီခေတ်
* ပထမ ဝေသာလီခေတ် သက္ကရာဇ် ၅၃၁၆ မှ ၃၃၂၅ BCE အထိ၊
* ပထမ ဓညဝတီခေတ် သက္ကရာဇ် ၃၃၂၅ မှ ၁၅၀၇ BCE အထိ၊
* ဒုတိယ ဓညဝတီခေတ် သက္ကရာဇ် ၁၅၀၇ မှ ၅၈၀ BCE အထိ၊
* တတိယ ဓညဝတီခေတ် သက္ကရာဇ် ၅၈၀ BCE မှ ၃၂၇ ADE အထိ၊
* ဒုတိယ ဝေသာလီခေတ် သက္ကရာဇ် ၃၂၇ မှ ၈၁၈ ADE အထိ၊
* လေးမြို့ခေတ် သက္ကရာဇ် ၈၁၈ မှ ၁၄၃၀ ADE အထိ၊
* မြောက်ဦးခေတ် သက္ကရာဇ် ၁၄၃၀ မှ ၁၇၈၄ ADE အထိ၊ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဘုရင်များ
ဤတွင် နှစ်ပေါင်းငါးထောင်ကျော် ရှည်ကြာလာခဲ့ရသည့် ရခိုင်မင်းဆက်အဆုံးသတ်ခဲ့ရုံသာမက ကျူးကျော်သူ ဗမာနယ်ချဲ့တို့က ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို မီးရှိ့ဖျက် ဆီး မှု့ကြောင့် ပြာပုံဘ၀သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ခုနှစ်သိန်းကျော် ရက်စက်စွာ အသတ်ခံခဲ့ကြရပြီး၊ နှစ်သိန်းကျော်သော ပြည်သူများမှာ တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခွါ ၍ အနောက်ဘင်္ဂလားဒေသနှင့်အိန္ဒိနိုင်ငံထဲသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြရသည်။ တစ်သိန်းကျော်မှာ ဗမာပြည်သို့ စစ်သုံးပန်းအဖြစ်နှင့် ယိုးဒယားသို့ ကျူးကျော် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာတို့တွင် လူသားဒိုင်းကာများအဖြစ်အသုံးပြုရင်း အပြန်လမ်းမရှိခဲ့ကြပေ။ ။
ပြည်နယ်မြ်ို့တော်အမည် ( စစ်တွေ)
ရခိုင်ပြည်နယ်ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းမှာ ၁၄၂၀၀.၀၈ စတုရန်းမိုင်ခန့်ရှိပြီး ဧကအားဖြင့်ဆိုလျှင် ၉၀၈၈၀၅ဧက ရှိပြီး စိုက်ပျိုးမြေဧကမှာ ၁၂၈၉၀၀၂ ဧကရှိကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ထုတ်ပြန်သော စာရင်းအရ သိရသည်။
လူဦးရေ ၃၈၈၃၃၃၀ (၂၀၀၉ ပြည့်နှစ် စာရင်း)
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခရိုင်၎ခု၊မြို.နယ်၁၈ မြို.နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ.စည်းထားပြီး စစ်တွေခရိုင်မှာ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုးံဖြစ်သည်။စစ်တွေခရိုင်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၂၂၁၁၂၇ ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၁၅၂၂၀၄၀ ရှိသည်။ကျောက်ဖြူခရိုင်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၈၄၄၉၁ ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၅၆၀၃၄၉ ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။သံတွဲခရိုင်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၆၁၇၄၀ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၃၇၆၄၅၀ ရှိပြီး မောင်တောခရိုင်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၉၆၈၂၅ ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၇၂၄၄၉၁ ဦးဖြစ်သည်။ပြည်နယ်များထဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လူဦးရေအများဆုးံဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒုတိယ အများဆုးံဖြစ်သည်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအလျား အရှည်မိုင် ၃၆၀ ရှိသည်။လေ့လာဆန်းစစ်သူများအပြောအရ လက်ရှိရခိုင်လူဦးရေ မှာရန်ကုန်တိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခြားဒေသ များနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများအပါအ၀င်ဆိုလျှင် စုစုပေါင်း ၅သန်းနီးပါးရှိကြောင့် သိရသည်။၄င်းပြင် ရခိုင်ပြည်၏ သစ်တောကြိုးဝိုင်း ဧရိယာမှာ ၁၆၈၆၂၆၇ ဧက ရှိပြီး တောရိုင်းမြေဧရိယာမှာ ၃၅၃၂၂၉၉ ဧကနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သော ဧရိယာမှာ ၂၃၀၀၀၄၁ဧကရှိသည်။
ခရိုင် ၄ ခရိုင်
မြ်ို့နယ် ၁၈ မြို့နယ်
မြောက်ဦးမြို့၊ရသေ့တောင်မြို့၊ရမ်းဗြဲမြို့၊သံတွဲမြို့၊အမ်းမြို့ ၊မအီမြို. တို့ဖြစ်သည်။
7. သက် မျိုးနွယ်စု တို့ဖြစ်သည်။၂၂.၃.၂၀၁၂ (မင်းရပ်လူ)
၁၉၈၂ ခုမတိုင်မီက ဒိုင်းနက် သည်နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးစရင်တွင်ပါဝင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည်တိုင်းရင်းသားစာရင်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ရေး ဆွဲပြီးနောက် ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုးကွယ်သော ဒိုင်းနက် ကို တိုင်းရင်းသားစာရင်အဖြစ် ရေးသွင်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သော ရိုဟင်ဂျာ ကို တိုင်းရင်းသား စာရင်း မှ ပယ်ဖျက်ထားသည် ကို တွေ့ရှိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားကို တိုင်းရင်းသားအစီစဉ်တွင်ကျေညာခဲ့သည့် သမိုင်းအထောက်အထားတခု
← သားအိမ်ကင်ဆာကိုခွေးဖြင့်အနံ့ခံခိုင်းပြီး သိနိုင် ဟု ဆို
ဆီးရီးယားအရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ သဘောကွဲ →
One comment on “ရခိုင်လူမျိုး သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်”
Mohamad Anis May 1, 2014 at 8:51 am	Reply
အမှန်​တရား ဆိုတာ ဖုးံထားလို မရပါ
လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ စိတ်​ဓါတ်​နဲ့ ရှင်​သန်​
တက်​​သော လူ​တွေ ကိုယ်​လူမျိုး အပြစ်​
ကို ဖုးံထား​စေရန်​ ဘယ်​​လောက်​ဘဲ
ကြိုးစာ ဘုရား သခင်း ​ကျေးဇူး​ကြောင်